Otu esi egbochi otu kọntaktị GTalk ma ọ bụ karịa | Akụkọ akụrụngwa
GTalk bu oru nke Google n’enye anyi nke mere na anyị nwere ike ịgwa onye ọ bụla n’ime kọntaktị anyị okwu na ndị enyi anyị gbakwunyere na ndepụta ahụ. Ọ bụrụ na anyị ejiri ihe nchọgharị Internetntanetị, anyị nwere ike ịbanye na gburugburu nkata iji malite mkparịta ụka n'oge ahụ.
Ndị bụ akụkụ nke ndepụta kọntaktị na ndị nwere akaụntụ Gmail (ma obu Google n'ozuzu) ha bụ ndị ga-apụta na GTalk; Ugbu a, enwere ike mmadụ tinye anyị dị ka onye na-eso ụzọ site na akaụntụ Google ha, wee nwee ike ịpụta na ndepụta ndị a anyị ga-akparịta ụka, ihe ọ na-eme ihere ma ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo enyi anyị anyị achọghịkwa ka anyị na onye ahụ nwee ụdị nkwurịta okwu ọ bụla. Maka nke a, ugbu a anyị ga-ekwupụta ntakịrị aghụghọ ị nwere ike iji gbochie otu ma ọ bụ karịa n'ime kọntaktị ndị a na-ejikwa GTalk.
1 Gbochie onye ọrụ na listi GTalk
2 Chọọ kọntaktị iji gbochie na GTalk
Gbochie onye ọrụ na listi GTalk
Ọ bara uru ikwu ntakịrị, na ozugbo ịbanye na akaụntụ Gmail gị site na ihe nchọgharị Internetntanetị, ịnwere ike ịga GTK na-akparịta ụka ebe dị mfe; O nwere ike ịbụ na ọrụ ahụ adịghị arụ ọrụ, naanị ị ga-emetụ obere akara ngosi aka banye na akaụntụ nke aka gị Ọ bụrụ na ịchọta onye ọrụ ejikọtara, ịnwere ike izipu ha ozi ozugbo ahụ, onye ga-azaghachi gị dabere na ịdị ngwa nke arịrịọ gị. Ugbu a, ọ bụrụ na ị ga-ahụ kọntaktị nwere akara ngosi "apụ", ọ pụtara na ha adịghị n'ịntanetị.
Ọ dịghị mkpa na ị nọghị n'ịntanetị, nke ọma ozi ị zitere site na GTalk ga-enweta ya otu oge kwuru onye ọrụ na-ejikọ ọrụ ahụ; Ugbu a, ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ ịnwa igbochi ụfọdụ nọmba kọntaktị site na GTalk a, n'okpuru n'okpuru anyị ga-akọwa naanị ụzọ abụọ dị maka nke a.
N'ezie ị banyeworị na akaụntụ Gmail gị, ma ga-arụkwa ọrụ a na GTalk gị. Ozugbo akara ngosi nke gi nwe ghari, ị nwere ike ugbu a nyochaa kọntaktị niile ị gbakwunyere na ndepụta gị; Ọ bụrụ n ’inwe ndị enyi ole na ole n’ime ya, ọrụ a ga-ebelata naanị:
Hover òké pointer n'elu aha kọntaktị gị.
Chere ka igbe obere nkọwapụta pụta.
Chọta obere akara ngosi akara ala (na ala aka nri nke dialog).
Họrọ akara ngosi a iji gosipụta menu gburugburu.
Site na nhọrọ ndị a gosipụtara, họrọ nke na-ekwu «igbochi".
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta, usoro a dị mfe iji mezuo n'agbanyeghị na, ihe dị mfe a bụ n'ihi na anyị nwere naanị ndị enyi ole na ole na ndị nke anyị chọrọ gbochie ụdị mkparịta ụka ọ bụla na otu n'ime GTalk anyị.
Chọọ kọntaktị iji gbochie na GTalk
Ọnọdụ ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na listi ịkpọtụrụ anyị buru oke ibu ma buru ibu; N'oge ahụ, anyị kwesịrị iji obere ogwe na-agba ọsọ nke dị n'akụkụ otu akụkụ ndepụta kọntaktị n'ime mpaghara GTalk, ma gbalịa ịchọta kọntaktị ahụ anyị chọrọ igbochi.
Ọ bụrụ na ịchọta ya, anyị ga-etinye usoro anyị jiri na mbụ. Ọ bụrụ na anyị amaghị ebe kọntaktị a dị (ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ pụtaghị n'ihu anyị n'oge ahụ), mgbe ahụ anyị ga-etinye usoro aghụghọ a:
Anyị na-amalite nnọkọ na Gmail na mgbe e mesịrị na GTalk.
Na oghere ọchụchọ nke na-ekwu «Chọọ kọntaktị ...»Anyị na-etinye aha onye anyị chọrọ igbochi.
Ndepụta nke nsonaazụ ga-apụta.
Anyị na-etinye pointer pointer na nsonaazụ nke kọntaktị anyị chọrọ igbochi.
A ga-egosi windo mmapụta ahụ pụtara na usoro gara aga na usoro a. Nke a pụtara na n'otu ụzọ ahụ anyị ga- họrọ akara ngosi nkata pere mpe nke na-ebugharị menu ndị gbara ya gburugburu ya mere, anyị nwere ike mechara họrọ nhọrọ "gbochie".
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkpọghe kọntaktị ọ bụla ị gbochiri egbochi, ị nwere ike ime ya na enweghị nsogbu ọ bụla; ị kwesịrị ịchọ ya ma ọ bụ tinye aha ya na mpaghara ọchụchọ GTalk na mgbe ịchọtara ya, soro otu usoro mana ugbu a, ịhọrọ nhọrọ "Akpaaka".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Aghụghọ iji Gbochie kọntaktị na GTalk
Otu esi achọpụta ọtụtụ ngwaọrụ jikọtara na akaụntụ Gmail anyị